ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ 'Anime' ကုတ်အင်္ကျီ - JAPO Japanese News
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ‘Anime’ ကုတ်အင်္ကျီ
ကြာ 28 Nov 2019, 11:41 မနက်
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက် တနင်္လာနေ့မှာတော့ တိုကျိုစိန့်မယ်ရီကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းရဲ့ လူငယ်အစည်းအဝေးကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီကို သွားရောက်တဲ့အခါမှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ဟာ ဂျပန်ရိုးရာကုတ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလက်ဆောင် အင်္ကျီကတော့ ရိုးရိုးသာမာန်ရိုးရာအင်္ကျီမဟုတ်ဘဲ ထူးခြားတဲ့ကုတ်အင်္ကျီတစ်ထည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအင်္ကျီရဲ့အရောင်က အပြာရောင်နဲ့ ပန်းရောင် စပ်ထားပြီး ဒါကို “happi” လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆာကူရာပန်းလေးတွေပါ ပါပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးပုံနဲ့ ကြိုဆိုနေကြတဲ့ပုံတွေလည်း ပါပါတယ်။
” ကျေးဇူးတင်ပါတယ်“ ၊ ” အတူတူဝတ်ပြုကြမယ်” ၊” ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ” ၊” ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ဖေးမနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်” ၊” ပုပ်ရဟန်းမင်းရှိအဖြစ်ရှိနေပေးလို့ ဝမ်းသာပါတယ်” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့စာသားတွေကိုတောင် ရေးထားပါသေးတယ်။
အင်္ကျီလေးက ကာတွန်းပုံစံအင်္ကျီဖြစ်နေပေမယ့် အသက် ၈၂ နှစ်အရွယ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက လက်ခံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဟာ Nov 23 မှာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး စိန့်မယ်ရီဘုရားကျောင်းအပြင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဟိရိုရှိမားနဲ့ နဂစခိ ခရိုင် ကိုလည်းသွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ASEAN-Japan Music Festival 2019
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကြောင်သရဲ mascot လေးများ !!!
အပြာရောင် Ramen ကို စားကြည့်ကြရအောင်!
လူတွေရဲ့အာရုံထဲမှာမှေးမှိန်လာစပြုလာတဲ့ ရာဇဝင်တွင် ယန်း 300 million မှုခင်း !!